"वफादारसँग भेट्नुहोस् Microgaming"प्रतियोगिता!
तपाईं एक ब्रान्ड नयाँ आईप्याड प्रो चाहनुहुन्छ? अब पर्खनु पर्दैन! नयाँ "वफादार माइक्रोभाइम" प्रतिस्पर्धामा यसलाई जित्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाइँले भर्खरैका एप्पल उपकरणहरू प्राप्त गर्न सबैको लागि केवल एक विशेष माइक्रोगाइम खेल खेल्न मनपर्छ र तपाइँले अन्तिममा पुग्नुहुने प्रत्येक गोलमा योग्यता प्राप्त गर्दछ। सम्झनुहोस्, जब तपाइँ अर्को एक पछि एक गोल जित्नुहुन्छ, एक वांछित आईप्याड प्रो तपाईंलाई नजिक छ। आफैलाई चुनौती दिन सुरु गर्नुहोस्, तर तपाईले यो प्रतियोगिता हल्लाउनु अघि यसको बारे थप जान्न सिक्नुहोस् यहाँ र तपाईंको जम्मा उपहारबाट लाभ उठाउन निश्चित गर्नुहोस् अहिले सक्रियताका लागि उपलब्ध छ:
जोस क्यासिनोमा अनौठो रोमांसमा 20 फ्रिडिन्स अपडेट गरिएको: जुन 24, 2019 लेखक: Damon
सम्बन्धित बोनस "जय क्यासिनोमा अमर रोमान्समा २० फ्रिस्पिनहरू":
"जय क्यासिनोमा अमर रोमान्समा २० फ्रिस्पिनहरू" सँग खेल्न सुरू गर्नुहोस्।